सजिला ५ ट्रिक्स, जसले युवतीलाई हुरुक्कै आकर्षित पार्न सक्छ सम्बन्ध - Khabar Nepali
होमपेज / रोचक / सजिला ५ ट्रिक्स, जसले युवतीलाई हुरुक्कै आकर्षित पार्न सक्छ सम्बन्ध
सजिला ५ ट्रिक्स, जसले युवतीलाई हुरुक्कै आकर्षित पार्न सक्छ सम्बन्ध
मिल्दो शौख : यस्तो सौख राख्नुहोस्, जसमा उसको पनि रुची होस् । यसले तपाईहरुलाई जोड्ने काम गर्छ । आपसमा एकैनासको सौख छ भने तपाईहरु एक ठाउँमा आउनुहुनेछ । मिल्दो शौख पनि तपाईहरुबीचको मिलनबिन्दु बन्न सक्छ ।
स्मार्ट बन्नुहोस् : आफ्नो व्यक्तित्वमा ख्याल राख्नुहोस् । चाहे लुगा लगाउने कुरामा होस् वा बोल्ने कुरामा, स्मार्ट देखिनुपर्छ । तपाईको प्रस्तुती पनि यस्तो हुनुपर्छ, जसले अरुलाई प्रभावित पार्न सकियोस् ।
मस्त इन्जोए गर्नुहोस् : यदि कुनै युवतीलाई मन पराउनुहुन्छ भने सबै कुरा छाडेर उनको पछाडि नलाग्नुहोस् । जसरी हुन्छ आफ्नो जीवनलाई लोभलाग्दो बनाउनुहोस् । रमाउनुहोस् र जीवनको भरपुर आनन्द लिनुहोस् । यस्तो मस्त जीवनशैली देखेर युवती स्वत तपाईप्रति आकर्षित हुनेछिन् ।
कति रहस्य खुलाउने : युवतीलाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो महसुष गराउनुहोस् कि, उनी तपाईको निम्ती कति विशेष छिन् ? यसका लागि तपाईले आफ्नो केहि गोपनियता वा रहस्य खुलाउनुहोस् जो कसैलाई सुनाउनु भएको छैन । यसले गर्दा उनले आफ्नो जीवनमा एकदमै स्पेशल फिल गर्नेछिन् ।
केहि गर्नका लागि भन्नुहोस् : के तपाई आफ्ना साथीका लागि हरेक काम गरिदिनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाई एक कदम अघि बढ्नुपर्नेछ । कहिले काहीँ उसलाई पनि आफ्नो काम गर्न लगाउनुहोस् । यसले उसलाई तपाईप्रति जिम्मेवार बनाउन सिकाउँछ ।
– उनीसँग सधै राम्रो वार्तालाप गर्नुहोस् । कुनैपनि कुरा गर्नुअघि सोच्नुहोस् । आफुले बोलेको कुरामा उसको कति रुची छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुहोस् । – बोलीचालीमा नाटकीयता झल्कनुहुन्न । प्राकृतिक एवं स्वभाविक रुपमा प्रस्तुत हुनुहोस् ।
– मनकारी र सहयोगी बन्नुहोस् । – युवतीलाई यस्तो महसुष नहोस् कि तपाई उसको पछि लाग्नुभएको छ । यद्यपी उसको हरेक कुरामा ख्याल गरेको महसुष गराउनुहोस् । – धेरै पटक भेट्ने, फोन गर्ने वा सहजै सम्पर्कमा रहने बानी ठीक होइन । यसले तपाईको महत्व नरहन सक्छ ।